Rice - MyanTrade
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆန်ကို ဘာကြောင့် ဝယ်သင့်သလဲ? (Why buy Rice from Myanmar?)
- မြန်မာနိုင်ငံသည် အစဉ်အလာအားဖြင့် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
- သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အစဉ်အလာအားဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရတန်ဖိုး များဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ဆန်လုံးညို(Brown Rice)ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။
- ဆန်လုံးညို(Brown Rice)တွင် အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများကို ချေဖျက် ခြင်း၊ ဝမ်းမှန်ခြင်းနှင့် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းများကို ချောမွေ့စေခြင်း စသည့် အကျိုး ကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းပါသည်။
- ဆန်တွင် ကလေးများအတွက် လိုအပ်သော ဗီတာမင်ဘီ(B complex vitamins)နှင့် ပရိုတိန်း(အသား)(Protein)ဓာတ်များ၊ မြင့်မားသော စွမ်းအင်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အစာကြေလွယ်ခြင်း၊ နို့နှင့်ရော၍ စားသုံးပါက ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်အားဖြည့်လွယ်ခြင်းနှင့် ဝမ်းပျက်ခြင်း(Diarrhea)၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း(Dysentery)များ ပျောက်ကင်းစေခြင်း စသည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်ပါသည်။
ဆန်တွင်ပါဝင်သော ပရိုတိန်းသည် ကြွက်သားများဖွံ့ဖြိုးရန် အလွန်အသုံးဝင်သကဲ့သို့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်
(Amino Acids)ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများကို ပြန်လည်အားဖြည့်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။
ထို့အပြင် အမိုင်နိုအက်ဆစ်သည် အရွက်များ အကြောများ(Ligaments and Tendons) သန်မာအောင်လည်း အထောက်အကူ ပြုပါသည်။ (ရောဂါပျောက်စေနိုင်သော အစားအသောက်များ-Foods that heal)
ဆန်(အထူးသဖြင့် ဆန်ဖြူ)(White Rice)သည် အလွန်အစာကြေလွယ်သောကြောင့် အစာချေဖျက်မှု အားနည်းသော ကလေးငယ်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ကလေးများ၏ အစာခြေစနစ်သည် ကောင်းစွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးသည့်အတွက် အစာကြေလွယ်သော အစာများကို စားသုံးခြင်းက ကျန်းမာ ရေးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ (ရောဂါပျောက်စေနိုင်သော အစားအသောက်များ-Foods that heal)
မြန်မာ့ဆန်တင်ပို့ရေးကဏ္ဍ (The Myanmar Rice Export Sector)
ဆန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ့စိုက်ပျိုးမြေ စုစုပေါင်း၏ တစ်ဝက် ကျော်ဖြစ်သော ဟက်တာ ၈ သန်းကျော်တွင် စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိပါသည်။ ဆန်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် တန်ချိန်ပေါင်း ၁၈ သန်းရှိရာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် (၂၂)သန်းအထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးမြေများ တိုးချဲ့လာမှုနှင့် စပါးအထွက်တိုးမှုတို့ကြောင့် ဤသို့တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးစနစ်များမှာ ရေသွင်းစပါး၊ မိုးစပါး၊ ပျိုးကြဲ၊ ရေနက်စပါးနှင့် ပျိုးစပါး၊ ကုန်းမြင့်စပါး(ရှမ်းဆန်)တို့ဖြစ်ကြသည်။ မြေနိမ့်ဒေသမိုးစပါးကို မုတ်သုံရာသီ၌နောက်ပိုင်း ရေကျသည့်အချိန်တွင် အပင်လိုက်စိုက်ပျိုးကြသည်။
မြေနိမ့်ဒေသမိုးစပါး(မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဂေဟစနစ်)နှင့် ရေနက်စပါးကို မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် ရခိုင်ကမ်းမြှောင်တို့တွင်သာ စိုက်ပျိုးနိုင်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း ရန်ကုန်၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းအပါအဝင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ခန့်တွင် မိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် ရရှိမှု အနေအထားအပေါ်မူတည်၍ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမိုးနည်းဒေသ များတွင် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေးသည် အထူးအရေးပါပြီး မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင်မူ ရေစီး ရေလာကောင်းစေရန်နှင့် ရေလျှံမှုမှ ကာကွယ်ရန်အထူးဂရုပြုရသည်။ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းနှင့် ရှမ်း ပြည်နယ်တို့သည် များသောအားဖြင့် ကုန်းမြင့်ဒေသများဖြစ်ကြသည်။ မြောက်ပြန်ဆောင်းလေ တိုက်ခတ်ပြီး အေးမြသော ရှမ်းကုန်းမြင့်ဒေသအချို့တွင် (ဆင်ခြေလျှော) တောင်ယာစပါးကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
မြန်မာ့ဆန်တင်ပို့သူအများစုသည် မြန်မာ့ဆန်ဖြူကို ဂျပန်၊ အီးယူနိုင်ငံများ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ တရုတ်၊ အာဖရိကနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ကြသည်။
မြန်မာ့ဆန်များကို ဆန်ကျိုး(ဆန်ကွဲ) ပါဝင်မှု ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၀၊ ၁၅၊ ၂၅ နှင့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းစသည် အပေါ်မူတည်၍ အဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုး ခွဲခြားထားသည်။ ဆန်အိတ်အရွယ်အစားကိုမူ မှာယူသူ လိုအပ်ချက် အမျိုးမျိုးအပေါ် မူတည်၍ ၅၀၊ ၂၅၊ ၅ ကီလိုဂရမ် စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းတင် ပို့ပါသည်။
ရေပေါများစွာ ရရှိသည့် ဒေသများတွင် ဆန်အများဆုံးထွက်ရှိပြီး အာရှနိုင်ငံများဖြစ်ကြ သော တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနှင့် မြန်မာတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆန်အဓိက ထုတ်လုပ်သော နိုင်ငံ များဖြစ်ကြသည်။ ရေအရင်းအမြစ်ပေါင်းများစွာ ရရှိသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
လယ်ယာထွက်ကုန်များ တိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားပို့ကုန်မြင့်တက်ရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ပြီး ဆန်စပါးသည် အဓိကမှပါဝင်ပါသည်။